Casharkan, waxaan ku siin doonaa macluumaad ku saabsan dalalka iyo luqadaha Ingiriisiga, iyo dalalka iyo jinsiyadaha Ingiriisiga. Waxaan rajaynaynaa in casharkan, oo bixin doona macluumaadka ku saabsan magacyada dalalka Ingiriisiga iyo dalalka Ingiriisiga iyo turkigooda, uu noqon doono mid waxtar leh.
English; Waa mid ka mid ah luqadaha ajnabiga ah ee loogu hadlo adduunka. Sidoo kale luuqada English-ka ayaa looga hadlaa qaar kamid ah wadamada Africa iyo America oo ay horey u gumeysan jireen Ingiriiska gaar ahaan wadamada Yurub. Turkiga, waxbarashada Ingiriisidu waxay noqotay mid muhiim ah gaar ahaan tan iyo horraantii 1990-meeyadii. Waxaynu odhan karnaa waxbarashadii Ingiriisiga oo ka bilaabantay dugsiga sare sannadihii ina dhaafay, waxay maanta hoos ugu dhacday heerka dugsiga hoose iyo barbaarinta sannadihii 2000-aadkii. Iyo sidoo kale, English Mahadsanid tan, waxa ay suurtagashay in la gaaro fursado ganacsi oo cusub. Maalmahan, marka aan ku jirno 2020-yada, waa lagama maarmaan in dadku ay helaan aqoonta Ingiriisiga iyo kombuyuutarka shaqo raadinta. Natiijo ahaan, Baro Ingiriiska; lagama maarmaanka u ah sababo badan oo kala duwan.
Hadda aynu eegno higgaadda Ingiriisiga ee waddammada, wax ay dad badani rabaan inay bartaan!
Afgaanistaan ​​- Afgaanistaan
Shiinaha - Shiinaha
Kolombia - Kolombia
Kuuba - Kuuba
Masar – Masar
Faransiiska - Faransiiska
Giriiga - Giriigga
Israa'iil - Israa'iil
Talyaaniga - Talyaaniga
Kuuriya - Kuuriya
Filibiin - Filibiin
Sacuudi Carabiya - Sacuudi Carabiya
Turkiga - Turkiga
Maraykanka – Maraykanka
Natiijo ahaan, waa inaad si dhab ah u barataa Ingiriisiga u dhigma ee dalalka kor ku xusan. Waxaynu odhan karnaa wadamada aad kala kulmi doonto nolol maalmeedka iyo ganacsigaba waa wadamada kor ku xusan. Waxaad diyaarin kartaa kaararka tababarka si aad u xifdiso wadamadan. Ka sokow, waxaad ku dhejin kartaa qoraallada ka dambeeya qolkaaga. Sidan, waxaad heli doontaa hab shaqo oo ku xasuusin doona mar kasta oo aad aragto.
Intaa waxaa dheer, waa in aan eegno sida wadamada kor ku xusan ay u qoran yihiin jinsiyad ahaan. Mawduuca soo socda, waxaan ku arki doonaa mawduuca quruumaha Ingiriiska.
English Erayga dhalashada meelo badan lagama isticmaalo. Hadda waa inaan eegno sida wadamada iyo muwaadiniinta ku nool wadamadan loogu qoray jinsiyad ahaan.
Brazil - Baraasiil
Cambodia - Kamboodiya
Shiinaha - Shiine
Kolombia - Colombian
Kuuba - Cuban
Masar - Masar
Ingiriiska - Ingiriis
Estonia - Istooniyaan
Itoobiya - Itoobiya
Faransiiska - Faransiis
Jarmalka - Jarmal
Giriiga - Giriig
Indonesia - Indooniisiya
Talyaaniga - Talyaani
Jabaan - Jabaan
Urdun - Urdun
Portugal – Boortaqiis
Ruushka - Ruush
Isbaanish - Isbaanish
Turkiga - Turki
Yukreeniyaan - Yukreeniyaan
Mareykanka - Ameerika
Fiyatnaam - Fiyatnaamiis
Dalka (dalka) iyo dhalashada Waxaan ku sharixi karnaa faraqa u dhexeeya (qaranka) tusaalayaashan soo socda:
Waxaan ka imid Turkiga Waxaan ahay Turki (Waxaan ka imid Turkiga, waxaan ahay Turki.)
Turkiga waa mid ka mid ah wadamada aan waligey booqday. Dadka Turkiga aad bay u nugul yihiin. (Turkigu waa mid ka mid ah wadamadii aan booqday! Turkigu aad bay u dareensan yihiin!)
Tusaalaha jumladaha wadamada Ingiriisida
English Erayga dhalashada meelo badan lagama isticmaalo. Maaha mawduuc si gaar ah loogu xuso wada sheekaysiga maalinlaha ah. Si kastaba ha ahaatee, waa in aan sheegnaa in ay tahay erey loo isticmaalo qoraal ahaan dukumentiyada la xiriira socdaalka ama dalxiiska. Haddii aad shaki ka qabto luqadda lagaga hadlo dalkiisa ka dib markaad barato qof aad hadda la kulantay, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad barato luqadda hooyo ee dalka. Halkaa marka ay marayso, waa in aad waydiiso qofka kale ee wata noocyada su'aalaha soo socda.
Halkee ka timid? (Xaggee ka timid, xaggee ka timid?)
Waxaan ka imid Turkiga (waxaan ka imid turkiga.)
Ma ka timid Turkiga? (Ma ka timid Turkiga?)
Haa, waan ahay. (Haa.)
Xagee bay ka yimaadeen Ayse iyo Ahmet? (Aaway Ayse iyo Ahmet, wadankee bay ka yimaadeen?)
Waxay ka yimaadeen Turkiga. (Waxay ka yimaadeen Turkiga!)
Intaa waxaa dheer, haddii aad rabto in aad waydiiso su'aal ku saabsan dhalashada qofka ka baxsan dalkiisa, waxaad isticmaali kartaa qaababka su'aalaha soo socda.
Jinsiyaddee ayaad tahay? (Halkee ka timid?)
Waxaan ahay Turki (Waxaan ka imid Turkiga.)
Waa maxay dhalashadaadu? (waa maxay dhalashadaadu?)
Waxaan ahay Talyaani (waxaan ahay talyaani.)
Intaa waxaa dheer, waa inaad isticmaashaa qaab su'aal kale si aad u ogaato meesha uu qofku ku dhashay.
Halkeed ku dhalatay? (Halkeed ku dhalatay?)
Waxaan ku dhashay Turkiga. (Waxaan ku dhashay Turkiga.)
Tixgelin kale oo muhiim ah ayaa noqon doonta luqadda uu qofku ku hadlayo. Si aad u barato macluumaadkan, waa inaad isticmaashaa qaab su'aal oo ka duwan.
Luqaddee ayaad ku hadashaa? (Luqaddee ayaad ku hadashaa?)
Waxaan ku hadlaa Turki (Waxaan ku hadlaa Turkiga.)
Afkee ayay ku hadashaa? (Afafkee ayuu ku hadlaa?)
Waxay ku hadashaa Turkish, English iyo German. (Wuxuu ku hadlaa Turki, Ingiriis iyo Jarmal.)
Layli ku saabsan Wadamada oo Ingiriisi ah
wadamada iyo jinsiyadaha ingriiska
Layliga soo socda ayaa sidoo kale aad faa'iido kuu leh inaad barato maadada.
(Spain) - Waxaan ka imid…. Ben…..
(France) - Wuxuu ka yimid…. Waa…
(Britain) - Waxaan ka nimid…. Waxaan nahay…..
(Giriig) - Waxay ka timid….. waa….
(Mexico) – Waxay ka yimaadeen…. Waxay kala yihiin…..
(Poland) - Wuxuu ka yimid…. Waa…..
(Jamhuuriyadda Czech) – Waxaad ka timid … Waxaad tahay….
(USA) - Wuxuu ka yimid…. Isagu waa….
Jawaabo sax ah:
Ingiriis / Ingiriis
Giriig / Giriig
Booland / Polish
Waxaan u maleyneynaa in jimicsiyadani ay sidoo kale faa'iido yeelan doonaan.
Waxaan ku noolahay Faransiiska Ben….
Waxaan ku noolahay ……… Waxaan ahay Ingiriis.
Waxaan ku noolahay Ameerika Ben…..
Waxaan ku noolahay…. Waxaan ahay Irish.
Waxaan ku noolahay Talyaaniga. Ben…..
Waxaan ku noolahay…., waxaan ahay Isbaanish.
Waxaan ku noolahay Jarmalka. Ben….
waxaan ku noolahay…. Waxaan ahay Jabbaan
Waxaan ku noolahay Scotland. Ben….
Waxaan ku noolahay Great Britain. Ben….
Jawaabaha saxda ah waa;
Sidee loo samayn karaa waddan la jaan qaadaya qaab-dhismeedka astaanta u ah waddamada?
Buundada Mostar - Bosnia iyo Herzegovina
Darbiga Berlin - Jarmalka
Taallada Xorriyadda - Mareykanka
Taallada Ciise - Brazil
Darbiga Wayn ee Shiinaha
Tower Azadi - iiraan
Kolosseum - Talyaaniga
Venice - Talyaaniga
Ahraamta - Masar
Taallada Saacadda Taariikhiga ah - Czech Republic
Qasriga Kremlin - Ruushka
Taj Mahal - Hindiya
Hoyga Parthenon - Greece
Ka warran jimicsi aad ka hadli karto aqoontaada kubbadda cagta? Halkan hoose ka daawo xulalka England iyo kooxaha kubbada cagta ee isku aaday.
kooxaha kubbadda cagta ee dalalka Ingiriiska
Tixgelinta Marka aad baraneyso Ingiriisiga
Waxaa jira waxyaabo badan oo la tixgeliyo marka la baranayo Ingiriisiga. wadamada kor ku xusan. English Si aad u hesho hawlkarnimo buuxda markaad baranayso wax u dhigma, waa inaad doorataa habka waxbarasho ee ugu habboon naftaada. Haddii aad u shaqeyso si waafaqsan hababka aan hoos uga hadli doono, waxaad ka heli doontaa waxtarka ugu badan ee shaqadaada. Si kale haddii loo dhigo, shaqadaadu weligeed ma dhacayso. Sida qof walba og yahay Baro Ingiriiska Waa geedi socod xoog leh. Helitaanka waqti, dadaal iyo lacag, kuwaas oo ka mid ah arrimaha saameeya habka waxbarashada, waa xaalad qof kastaa rabo.
Wax kale ka hor, English Waa in aan sheegno in ay jiraan wax ka badan hal hab oo wax lagu barto. Qof kastaa wuxuu rabaa inuu doorto habka waxbarasho ee ku habboon. Aadida dibadda, qaadashada koorsooyinka, qaadashada duruus gaar ah, iskuday inaad wax ka barato intarneedka ama is-barashada buugaagta kheyraadka; ayaa ka mid ah fursadaha ugu caansan. Intaa waxaa dheer, la sheekeysiga dadka ku hadla Ingiriisiga iyo mar kasta oo aad waqti haysato taxane English, daawashada filimada iyo baahinta kale ayaa ka mid ah hababka kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, waxaan dhihi karnaa in waxbarashada Ingiriisiga ee khadka tooska ah ay tahay mid wax soo saar leh maalmahan marka aan ku jirno 2020-yada. internet-ka Wadamada Ingiriiska Ku dhawaad ​​maaddo kasta way dhammaatay. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale ka heli kartaa layliyo Ingiriisi badan oo internetka ah. Waxaan kor ku soo bandhignay tusaalooyin sax ah. Wadamada Ingiriiska Waxa kale oo aad ka heli kartaa layliyo la xidhiidha intarneedka.
Waxaan kuu sheegnay inay jiraan waxyaabo badan oo la tixgeliyo marka la baranayo Ingiriisiga! Halkaa marka ay marayso, marka hore, wadamada Ingiriisiga ah ama erayada Ingiriisiga ee kala duwan ayaa loo baahan yahay in si sax ah loogu dhawaaqo. Haddii si khaldan loo sheego, dadka kale ayaa ku fahmi doona, dadaalkaaga intaad shaqaynaysona wuu lumi doonaa. Intaa waxaa dheer, fara badan English Waa inaad ku celcelisaa hadalka. Waa lama huraan in aad ku celceliso hadalka si aad labadaba u wanaajiso ku dhawaaqistaada oo aad u xafiddo erayada si fudud.
Wadamada Ingiriiska Wax kasta oo aad ka barato Ingiriisiga, gaar ahaan Ingiriisiga, waa inaad ku tijaabisaa waxaad ku baratay imtixaanno. Gaar ahaan ku-dhaqanku waa lama huraan. Wadamada Ingiriiska Waa wax dabiici ah in la jahawareeriyo mawduuca jinsiyadaha iyo jinsiyadaha haddii aanad wax badan ku dhaqmin. Sababtoo ah higgaadda iyo ku dhawaaqida erayada dal iyo dhalasho labaduba waa isku mid. Markaad baranayso wadamada Ingiriisiga, way fiicnaan lahayd in habkan loo beddelo ciyaar. Waa in aad isku daydaa in aad isku mid noqoto adiga oo ku qoraya labada Ingiriis iyo turkiga u dhigma ee wadamada kaadhadh badan. Intaa waxa dheer, aad bay faa'iido kuugu yeelan doontaa in aad is waafajiso qaab-dhismeedka muhiimka ah, fannaaniinta, ciyaartooyda iyo cuntooyinka dalalka leh. Si kale haddii loo dhigo, waa inaad habkan ka dhigtaa mid madadaalo leh laakiin waxtar leh intii suurtogal ah.
Ku dhawaaqida Ingiriisiga runtii waa muhiim! Sida sanadihii hore, marka Ingiriisida la sheego, naxwaha ama ereyada kuma soo dhacaan maskaxda. Waa lama huraan inaad barato sida saxda ah ee jumlada loo dhiso! Si kastaba ha noqotee, haddii aadan si sax ah ugu dhawaaqin erayada, suurtagal maaha in qofka kale uu ku fahmo. Sidaa darteed, waa inaad barataa weedho Ingiriisi iyo weedho leh dhawaaq sax ah. Sidaas ayaad ku fahmi doontaa waxa aad sheegayso oo dhib kuguma noqon doonto in ay fahmaan dadka kale. Halkaa marka ay marayso, muhiimada waxbarashada Ingiriisiga ee khadka tooska ah ayaa soo baxaysa. Haddii aad barato ku dhawaaqida saxda ah ee Ingiriisiga ee wadamada adiga oo dhageysanaya oo maskaxdaada gelinaya, wax dhib ah kalama kulmi doontid sanadaha soo socda. Si kale haddii loo dhigo, wax kasta oo aad barato waxay ahaanayaan kuwo joogto ah.
Baro Ingiriiska Waxaad u baahan tahay inaad waqti badan geliso shaqadan. Si kale haddii loo dhigo, kuma habboona inaad Ingiriisiga barato oo keliya wakhtiga firaaqada. Waa inaad u qoondaysay ugu yaraan hal saac maalin kasta shaqadan. Marka laga reebo taas, waxaad isticmaali kartaa wakhtigaaga firaaqada ah si aad mar kale u sameyso. Waa lama huraan inaad si joogto ah wakhti u qoondayso waxbarashada Ingiriisiga. Halkaa marka ay marayso, waxa laga yaabaa inaadan u helin wakhti aad ku gasho koorsada Ingiriisiga. Si kastaba ha ahaatee, waxaad si joogto ah u baran kartaa Ingiriisiga adiga oo dooranaya wakhtiga ugu habboon naftaada.
English Waxa kale oo aad muhiim u ah inaad go'aamiso habka shaqo ee ku habboon heerkaaga markaad wax baranayso. Haddii aad baranayso wadamada Ingiriisiga, waxaan dhihi karnaa heerkaagu waa bilow ama dugsi hoose. Halkaa marka ay marayso, waa in aad ku celisaa oo aad ku xoojisaa wixii aad baratay jumlado fudud iyo heer bilow ah adiga oo aan aad isku qasbin.
Waxyaabaha ay tahay inaad u ogaato kuwa doonaya inay bartaan wadamada Ingiriisiga
Baro Ingiriiska Xasuustu waa lagama maarmaan! Si kastaba ha ahaatee, ma gaari kartid meesha aad rabto adigoo kaliya xafidaya. Ka dib markaad barato macluumaadka aasaasiga ah sida wadamada Ingiriisiga, nambarada, magac-u-yaalka shakhsi ahaaneed iyo wixii la mid ah, waa inaad isku daydaa inaad inta soo hartay si dhab ah u barato. Halkaa marka ay marayso, inkasta oo ay tahay talo caadi ah, waa in aad daawataa taxane TV ama filimaan si aad ugu barato Ingiriisiga oo aad isku daydo in aad Ingiriisi kula hadasho dadka ajnabiga ah ee kugu xeeran. Waxaan arrintan ku macnayn karnaa tusaale wanaagsan. Aynu nidhaahno waxaa kugu adag inaad barato dalalka Ingiriisiga! Marka la eego, markaad daawato taxane Ingiriisi ah, waxaad heli doontaa macluumaad cad oo ku saabsan dhaqanka Ingiriiska, magaalooyinka, calaamadaha dalka, magacyada dadka dalka ka tirsan. Sidan, waa inaan sheegnaa in England ay noqon doonto mid aad u xasuus badan dhinac kasta. Intaa waxaa dheer, waxaa jira taxane TV oo tilmaamaya sifooyinka ku dhawaad ​​​​dal kasta maanta. Si kale haddii loo dhigo, waa inaad daawataa taxane TV, filimaan ama barnaamijyo wax ku kordhin doona waxbarashadaada Ingiriisiga.
Baro Ingiriiska; Waxaa lagu tilmaamay hannaan aad u adag ama xitaa aan macquul ahayn tan iyo sannadihii la soo dhaafay. Si kastaba ha ahaatee, waxaan dhihi karnaa in Ingiriisigu yahay luqad aad uga sahlan marka loo eego Turkiga. Sababtoo ah Ingiriisi ereyo yar buu leeyahay. Erayada isku midka ah ayaa Ingiriisi ahaan loogu adeegsadaa fikrado kala duwan. Tusaale ahaan, waxaa weli jira kelmadda Eeddo oo Ingiriisi ah oo keliya erayada tilmaamaya qaraabada, sida eedda. Waa caadi in ayeeyo iyo ayeeyo loogu yeero ayeeyo.
English; Waa luqad si fudud loo baran karo. Sababtoo ah waxay ku siinaysaa xoriyad badan si aad u abuurto xeerar adiga kuu gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, marka aad bilowdo barashada Ingiriisiga, waa inaad iska ilaalisaa cadaadiska naxwaha inta ugu badan ee suurtogalka ah. Xitaa haddii aad si buuxda u barato dhammaan xeerarka naxwe ahaaneed ee Ingiriisiga, suurtogal maaha inaad maskaxdaada joogto ku ahaato. Halkaa marka ay marayso, waa in aad marka hore dhaqan gelisaa qaababka loo isticmaalo nolol maalmeedka. Sidoo kale waa muhiim inaad barato wadamada Ingiriisiga.
Markaad baranayso Ingiriisiga, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa inaad u wareejiso qayb kasta oo noloshaada ah. Mid kasta oo naga mid ah waxa uu maraa makhaayadaha, kafateeriyada ama meelo kala duwan oo leh magacyo Ingiriisi marar badan maalintii. Halkaa marka ay marayso, way fududaan doontaa in lagu dhawaaqo erayada Ingiriisiga ah ee aan la kulanno.
Natiijo ahaan, haddii aad raacdo talada sare Wadamada Ingiriiska Maaddada waxaad ku baran kartaa dhibaato la'aan.
Sababaha aadka ugu macquulsan ee lagu baranayo Ingiriisiga!
English Faa'iidooyinka garashada waxaa yaqaan dadka da' kasta leh. Sida aan kor ku sheegnay, waa inaan sheegnaa inay jiraan faa'iidooyin ay ku jiraan inaad meel wanaagsan ka joogto nolosha ganacsiga, samaynta xirfad waxbarasho, inaadan la kulmin dhibaatooyin isgaarsiineed safarada dibadda, daawashada musalsalka TV-yada ajnabiga ah iyo filimada aan subtitles, ka faa'iidaysiga ilo shisheeye Internetka, iyo barashada Ingiriisiga maaddooyin kale oo badan. Tan waxaa dheer, garashada Ingiriisi sidoo kale aad bay muhiim ugu tahay xagga horumarka shakhsi ahaaneed!
English Haddii aad ogtahay, marka ugu horeysa, kalsoonidaadu way kordhi doontaa. Waxaan wada maqalnay weedha hal af hal qof, laba luqadood iyo laba qof! Haddii aad taqaano Ingiriisiga, waxaad si dhow u baran kartaa dhaqanka Ingiriiska, sidoo kale waxaad fursad u heli kartaa inaad raacdo ilo shisheeye. Si kale haddii loo dhigo, waxaad u noolaan kartaa sidii adigoo qof labaad ah, oo wax kasta oo aad ku qabato afkaaga hooyo luqad kale oo ka duwan. Qof kasta oo bini'aadam ah; Wuxuu bilaabay inuu wax ku barto habka dhalmada. Sidoo kale waa in aan sheegnaa in qofka wax barta xilli kasta oo noloshiisa ka mid ah uu noqdaa mid isku kalsoon mar kasta oo waxyaalihii uu bartay ay sii kordhayaan. Gaar ahaan, waa in la sheegaa in qofka barta inuu shaqadiisa si wanaagsan u qabsado isagoo helaya tababar xirfadeed uu si fiican uga faa'iidaysto fursadaha shaqo ee tababarka luqadda. Natiijo ahaan, ugu wanaagsan ee la heli karo iyo English Waa in aan sheegnaa in dareenka cajaa'ibka ah ee dhacaya markaad aragto dadka wax yaqaana maaha wax aan waxba tarayn.
English Haddii aad taqaan, waxaad bulshada dhexdeeda ka heli doontaa ixtiraam muhiim ah. Markaad hareerahaaga eegto, waxaad ogaan doontaa in dadka ku hadla luqad kasta oo qalaad, gaar ahaan Ingiriisiga, la ixtiraamo. Iyadoo la tixgelinayo in waxbarashada luqadda qalaad ay adag tahay maanta oo qof kastaa uusan si fiican u baran karin Ingiriisiga, tani waxay ku siin doontaa mudnaan weyn. Iyo sidoo kale, English Shakhsiyaadka yaqaan sida xirfadda loogu kaco muddo gaaban gudaheed. Sidan oo kale, ixtiraamka loo hayo xagga jagada iyo jagada ayaa si toos ah u kordheysa.
English Waa inaan sheegnaa in qof yaqaana uu dareemi doono fiicnaan. Way iska caddahay in dareenkani, sida baaskiil wadida ama kaxaynta baabuur, uu ku soo kordhin doono jawi ka duwan. Intaa waxaa dheer, waxaad dareemaysaa farxad iyo farxad badan. Intaa waxaa dheer, raaxaysiga iyo kibirka garashada Ingiriisiga gabi ahaanba way ka duwanaan doontaa.
Aqoonta Ingiriisiga; Waxay bedeli doontaa aragtidaada nolosha. Si kale haddii loo dhigo, waa in aan muujinnaa in ay ballaarin doonto aragtidaada. Waad ku mahadsan tahay luqaddan, wax dhib ah kuma yeelan doontid inaad barato dhaqamo cusub. Intaa waxaa dheer, waa in aan sheegno in Ingiriisku uu muhiimad muhiim ah u leeyahay qof kasta, kaas oo wanaajiya maskaxda, xoojiya xusuusta, kaa ilaaliya cudurrada kala duwan, gaar ahaan Alzheimers, hagaajinta maqalka iyadoo kordhinaysa dareenka.
Faa'iidooyinka Maskaxda ee Barashada Ingiriisiga
English barashada af qalaad, gaar ahaan; waxay u baahan tahay dadaal, dulqaad iyo shaqo hufan. Si kale haddii loo dhigo, maskaxda; jimicsiga inta lagu jiro habka waxbarashada. Barashada luqadda, oo ka bilaabata kortex-ka maqalka, waxay u gudubtaa gobolka Borca ee qaybta bidix ee maskaxda, ugu dambeyntiina waxay u gudubtaa gobolka kortex-ka, kaas oo muujinaya habka loogu dhawaaqo, waa waxqabad si dhab ah u tababara maskaxda. Barashada luqadda, oo ah hawl mar walba maskaxda ku haysa da'yar, dhab ahaantii waxa ay tilmaamaysaa hab aad u faahfaahsan. Maskaxdu waxay fasirtaa macnaha erayga lagu maqlo dadka labada luqadood ku hadlaba. Xaaladan; Waxay hubisaa in maskaxdu ay si joogto ah u shaqeyso oo ay u shaqeyso. Jimicsi lagu ilaalinayo xubnaha kale ee jirkeena oo da'yar; Waxay la mid tahay faa'iidada barashada luqadda ee maskaxda.
Sida lagu sheegay cilmi-baadhis ay samaysay Jaamacadda Edinburgh ee dalka Scotland, ayaa lagu ogaaday in maskaxda qofka barta luqad aan ahayn afkooda hooyo ay ka yar tahay asaagooda. Dhab ahaantii, waxa la go'aamiyay in shaqada maskaxdoodu ay kor u kacday marka loo eego wakhtiyadii hore, maskaxdooduna si aad ah ayey u shaqeeyaan, mana la kulmaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin waallida mustaqbalka. Si kale haddii loo dhigo, xitaa haddii dadku aysan haysan sabab ay ku bartaan luqad shisheeye, waxaa lagula talinayaa inay bilaabaan barashada luqaddan si ay maskaxdooda u yaraadaan.
Cilmi-baadhisyo ku saabsan barashada afka qalaad, waxa lagu caddeeyey in luqadda qalaad ay xoojiso dareenka oo ay kordhiso diiradda. Sidaan horey u sheegnay, barashada luqad cusub waxay maskaxda ku haysaa firfircooni mar kasta. Feejignaanta feejignaanta marka la baranayo luqadda waxay noqotaa isku mid xaalad kasta muddo ka dib.
# Wadamada Ingiriiska
# Wadamada Ingiriiska iyo Wadamada
# Tusaalaha jumladaha wadamada Ingiriisida
# Layli ku saabsan Wadamada oo Ingiriisi ah
# Tixgelinta Marka aad baraneyso Ingiriisiga
# Waxyaabaha ay tahay inaad u ogaato kuwa doonaya inay bartaan wadamada Ingiriisiga
# Sababaha aadka ugu macquulsan ee lagu baranayo Ingiriisiga!
# Faa'iidooyinka Maskaxda ee Barashada Ingiriisiga
Tags: 10-qaram ee Ingiriiska ah, 10-dalalka Ingiriiska, 9-qaram ee Ingiriiska ah, 9-dalalka Ingiriiska